कास्की-२ को चुनावी रौनकले चिसिदो मौसमलाई तताउँदै, परिणामले निरन्तरता पाउला या क्रमभङ्ग होला ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
कास्की-२ को चुनावी रौनकले चिसिदो मौसमलाई तताउँदै, परिणामले निरन्तरता पाउला या क्रमभङ्ग होला ? (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Nov 19, 2019
१. कास्की २ को चुनावी रौनकले चिसिदो मौसमलाई तताउँदै, परिणामले निरन्तरता पाउला या क्रमभङ्ग होला ?
कास्की चुनावी रौनकमा डुब्न थालेको छ । रबीन्द्र अधिकारीको अवसानपछि रिक्त बनेको कास्की २ मा मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनले क्षेत्र नम्बर २ लाई मात्र नभइ समग्र कास्कीलाई नै तताएको छ ।
मुलुकको नै ध्यान तान्न सफल यो क्षेत्रमा परम्परागत प्रतिद्धन्द्धीबीच नै तीब्र प्रतिष्पर्धा हुने देखिए पनि साझा र विवेकशीलको उम्मेद्वारहरुले पनि चर्चा बटुल्न थालेका छन् ।
रबीन्द्र अधिकारीले तीन पटक विजय हात पारेको यो क्षेत्रमा अहिले उनकी धर्मपत्नी विद्या भट्टराई नेकपाको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्दै गर्दा काँग्रेसले निष्ठाको राजनीति गर्दै आएका खेमराज पौडेललाई उभ्याएको छ । त्यस्तै साझाबाट रजनी केसी र विवेकशीलबाट जमुना शर्मा मैदानमा छन् ।
२. भिजिट ट्वान्टी ट्वान्टीमा आउने पर्यटकसंग सडक अवस्थाका कारण पहिला नै माफ माग्नु पर्ने भो
सरकारले भ्रमण बर्ष ट्वान्टी ट्वान्टी घोषणा गरेर १० लाख बढी पर्यटक सन् २०२० भित्र नेपाल भित्र्याउने अभियानमा लागिपरेको छ । यो संकल्पमा देश विदेशमा रहेका आम नेपाली र मुलुक वाहिर रहेका नेपाललाई माया गर्ने विदेशी नागरिक पनि सक्रिय देखिएका छन् ।
विदेशमा चर्को प्रचार प्रसार भइरहदा देश भित्रको तयारी भने कुन हालतमा छ भन्ने प्रमाणहरु जताततै छताछुल्ल हुदै आएका छन् । नेपाल घुम्न आउने विदेश पर्यटकहरुको रोजाईमा रहेका कास्की, मनाङ, मुस्ताङलगायतका जिल्लाहरु गण्डकी प्रदेशमा पर्छन । तर यहाँ पुग्ने सडक मार्गको हालत भने नाजुक छ ।
भ्रमण बर्ष सुरु हुनै लाग्दा पनि सडक कतैबाट पनि पर्यटक मैत्री बनाउन सकिएको छैन । पृथ्बी राजमार्ग अन्र्तगत तनहुँ खण्डको सडक हेर्दा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकसंग पहिला नै माफी माग्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
३.बागलुङ र पर्वतलाई जोड्ने दक्षिण एसियाकै अग्लो झोलुङ्गे पुल बन्दै
कालीगण्डकी नदीलाई काखमा राखेर बसेका तीन जिल्ला बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीको आआफ्नै छुट्टै विशेषता छन् । नजिक नदीले सीमा छुट्याएका यी जिल्लाहरुलाई जोड्न सडक यातायातको व्यवस्था त गरिएकै छ तर सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर अन्य विकल्पहरु पनि अघि सारिएका छन् ।
पर्वतमा रहेको नेपालकै सबभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुललाई माथ दिदै अब बागलुङ र पर्वतलाई जोड्ने गरी निर्माणाधीन दक्षिण एसियाकै अग्लो झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
२०७५ चैतबाट सुरु भएको निमार्ण कार्य २०७७ असारमा सक्ने गरी निर्माण थालिए पनि लक्ष्य भन्दा अघि नै पुल निर्माण कार्य सकिने भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै विशिष्ठता बोकेका यस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्दा स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा सहज हुने त निश्चित छ नै । अझ यस्ता संरचनाले पर्यटक आकर्षित गर्ने पनि पक्का छ ।